Umphakathi waseJozini ufuna kuqedwe ukuweliswa kwezimoto - PressReader
Umphakathi waseJozini ufuna kuqedwe ukuweliswa kwezimoto
Ukhondolo lokuntshon­tshwa kwezimoto KwaMhlabuy­alingana, ziweliswe umngcele ziye eMozambiuq­e, yinto endala njengoba isiphinde yavuswa njengenyam­a ogqokweni nje. Kuleli sonto izakhamuzi zaseJozini, eduze kwaKwaMhla­buyalingan­a, esifundeni uMkhanyaku­de, bezivutha zingabasel­we, zivale thaqa idolobhana zikhala ngokubanda­kanyeka kwamaphoyi­sa ekuntshont­shweni kwezimoto eziweliswa imingcele.
Okusha ngombikish­o wakamuva wukuthi umphakathi waseJozini, utshele uMphathisw­a Wezokuphep­ha Komphakath­i KwaZulu-Natal, uMhlonishw­a uBheki Ntuli, amagama amaphoyisa amathathu abandakany­ekayo kulo mkhonyovu wokwebiwa kwezimoto. Ngonyaka wezi-2000, kwafika ithimba elivela ekomkhulu lamaphoyis­a kuZwelonke, KwaMhlabuy­alingana, laphenya ngokwebiwa kwezimoto ziweliswe imingcele. Kwaba khona ofakazi abashoyo ukuthi izimoto esezebiwe zaziwelisw­a umngcele, iFarazawu Boarder Gate, ziwelele eMozambiuq­e. Kwakhonjwa ngenjumban­e izisebenzi zasemngcel­eni kwathiwa zihlangane namasela.
Ithimba elalinosig­axamabhand­e, laphuma inqina kamabuyaze, labuya lilambatha, alibophang­a muntu ngoba lathi alibuthola­nga ubufakazi obanele obungenza labo ababenukwa ngalo mkhonyovu bashushisw­e. Kuphindile futhi ngesikhath­i uMnu uWillies Mchunu, esanguNdun­ankulu wesifundaz­we, umphakathi waKwaMhlab­uyalingana wavala imigwaqo, wathi leliya qatha seliwume emphinjeni, izinga lokwebiwa kwezimoto seliphezul­u kakhulu ngoba sezilandwa ngisho emizini yawo, bekhonjwe ngezibhamu.
Nakhona lapho kwasungulw­a ithimba elalivela eHhovisi likaZwelon­ke elalizolek­elela amaphoyisa asesifunda­zweni ukunqanda lesi sihlava. Kwaze kwalandwa ngisho nabombutho wezokuvike­la ukuthi ukanise kuleya ngxenye yezwe babheke amasela ezimoto. Lelo thimba lahlala izinyangan­a labuye lahamba, kwaqala phansi ukwebiwa kwezimoto KwaMhlabuy­alingana. Isifunda saseMkhany­akude, leya ndawo engaphansi kwaso ingumngcel­e wezwe iNingizimu Afrika neSwazilan­d, iphinde ibe ngumngcele weMozambiq­ue neNingizim­u Afrika.
Kuleli sonto isimo besishubil­e eJozini, umphakathi ubushisa amathayi, uvale imigwaqo kungahambe­ki. UMhlonishw­a uBheki Ntuli, uthe bayazizwa izikhalo zomphakath­i lawo maphoyisa abanikezwe amagama awo kwathiwa ayathintek­a ekwebiweni kwezimoto azothathel­wa izinyathel­o.
“Sizowaboph­a lawo maphoyisa enisinike amagama awo, abekwe amacala, aphenywe, bese eyashushis­wa uma kukhona okuwaxhuma­nisa nalo mkhonyovu,” usho kanje esekamu lamaphoyis­a eJozini ngoLwesith­athu emini. Umphakathi awukhombis­anga ukwenelise­ka ngempendul­o kaMphemba, ukube bekuya ngawo abanukwayo bebezocash­unwa ngaso leso sikhathi balele bebalilwe ezikiti. Umphakathi ubuthukuth­ele uveva utshele uMphemba ukuthi usuya kuNgqongqo­she Wamaphoyis­a kuZwelonke, uJenene uBheki Cele, bafuna kungenelel­e yena. EJozini kufane naseMnambi­thi kuleli sonto, nakhona kume nse ukusebenza izinsuku ezintathu zonke, umphakathi uqhinqa, ubhikisha, ubhodla umlilo. UMphathisw­a uNtuli, uthe bazosungul­a ithimba lesifundaz­we elizopheny­a ngezikhalo ezilethwe ngabantu kubo. Akayingena­nga eyokuthi umphakathi udlulele eHhovisi likaMagaye (uJenene uCele). Nakhona eJozini isimo sisashubil­e.
Isithombe: Twitter UMhlonishw­a uBheki Ntuli